Gịnị bụ uru nke CBD? | Nhọrọ Ahụike kacha mma maka 2020
Ibe Facebook mepere na windo ohuruIbe Twitter meghere na windo ọhụrụIbe njikọ Linkedin ga-emepe na windo ọhụrụIbe Instagram ga -emepe na mpio ọhụrụIbe YouTube ga -emepe na mpio ọhụrụ
Ụlọ ahịa dị n'ịntanetị CBD
Ụlọ ahịa Delta 8 THC Ngwaahịa
Delta 8 THC ọ bụ iwu na steeti m?
Delta 8 THC & Mmemme Njikọ Njikọ CBD
Etu ị ga -esi mepee ụlọ ahịa ihe na -erughị $ 50 dollar
Zụrụ ngwaahịa CBD
CBD capsules & jel dị nro
Isi okwu CBD
Nlekọta Ahụike CBD
Mmanụ CBD & Tinctures
CBD Maka anu ulo
CBD Vape Pensịl
Kedu uru nke CBD
Azịza Ahụike Site na Weebụ Banyere Delta 8 THC & CBD
Kedu ihe dị iche n'etiti Mmanụ CBD na Mmanụ Spectrum zuru oke
CBD & Ọrịa shuga
CBD & Ahụike
CBD & Ọkpụkpụ
CBD maka enyemaka mgbu
Kedu ka Red Emperor CBD & Delta 8 THC si arụ ọrụ?
Uru nke CBD Oil
Ọtụtụ Uru nke Mmanụ CBD nke Ihe akaebe kwadoro
Cannabidiol ma ọ bụ CBD dịka amara ya nke ọma bụ ihe ama ama n'oge a. Uru nke https://trytranquil.net/product/cbd-roll-on/ dị ọtụtụ maka ọtụtụ ọrịa nkịtị. CBD bụ otu n'ime ihe karịrị 100 cannabinoids achọpụtara na Osisi cannabis sativa.
Tetrahydrocannabinol (THC) bụ cannabinoid psychoactive bụ isi a na -ahụ na cannabis, ọ bụ ihe mejupụtara wii wii ma na -ebute mmetụta nke ịdị elu. N'adịghị ka THC, CBD anaghị emetụta mmụọ. Omume a na-eme ka CBD bụrụ nhọrọ mara mma maka ndị na-achọ enyemaka n'agbanyeghị mmetụta wii wii na-agbanwe. A na -eme mmanụ CBD site na ịwepụta CBD site na osisi cannabis, wee jiri mmanụ na -ebu ya tụgharịa ya dị ka aki oyibo ma ọ bụ mmanụ mkpụrụ osisi hemp.
Uru nke CBD
CBD na -ebelata ihe mgbu: N'ime ahụ mmadụ, enwere sistemụ a na -akpọ sistemụ endocannabinoid, nke na -ahazi ọtụtụ ọrụ gụnyere agụụ, ụra, yana nzaghachi sistem. Ahụ na -emepụta neurotransmitters akpọrọ endocannabinoids nke ejikọtara na ndị na -anabata cannabinoid na sistemụ ụjọ. Dabere na nyocha, CBD na -enyere aka belata ihe mgbu na -adịghị ala ala site na imetụta ọrụ nke ndị na -anabata endocannabinoid na -ebelata mbufụt na iso ndị na -ahụ maka mgbasa ozi.
CBD nwere ike belata nchekasị na nkụda mmụọ: A na -ejikarị ọgwụ ọgwụ eme ihe maka nchekasị na ịda mba, nke nwere ike ibute ọtụtụ mmetụta dị iche iche gụnyere mgbakasị ahụ, iro ụra, nkwarụ mmekọahụ, ehighị ụra nke ọma, na isi ọwụwa. Ọ ga-ekwe omume na https://trytranquil.net/product/cbd-roll-on/ mmanụ nwere ike bụrụ ọgwụgwọ maka nchekasị na nkụda mmụọ, na-enye ndị bi na nsogbu ndị a ohere ịchọta ngwọta eke. Enwere ike iji CBD gwọọ ehighi ura na PTSD. Uru ndị a nke mmanụ CBD jikọtara na ikike nke CBD nke ime ndị nabatara serotonin, neurotransmitter nke na -ahazi ọnọdụ na akparamagwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
CBD nwere ike ịnwe Njirimara Neuroprotective: Ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na otu n'ime uru mmanụ CBD bụ na ikike ime ihe na sistemụ endocannabinoid nwere ike ịba uru maka ndị na -arịa ọrịa akwara ozi. N'ezie, otu n'ime nyocha emere nke ọma maka CBD n'ịgwọ ọrịa akwara dị ka akwụkwụ na otutu sclerosis. Agbanyeghị na ọmụmụ ihe na mpaghara a ka dị ọhụrụ, ọtụtụ ọmụmụ egosila nsonaazụ na -ekwe nkwa. Ka o sina dị, ọ dị mkpa ịkọwa na ụfọdụ ndị nọ n'ọmụmụ ihe a nwetara mmetụta nke abụọ metụtara ya Ọgwụ CBD, dị ka ahụ ọkụ, ike ọgwụgwụ, na ahụ ụfụ. CBD na Delta 8 THC na nnukwu amụọla maka ikike ha nwere ịgwọ ọtụtụ ọrịa akwara ozi ndị ọzọ.
CBD nwere ike belata ihe mgbaàmà metụtara ọrịa kansa: Otu uru arụrụ arụ nke ebubo mmanụ CBD bụ na ọ nwere ike nyere aka na mgbaàmà metụtara kansa. Ihe doro anya, n'agbanyeghị na CBD nwere ike inyere ndị na -arịa ọrịa kansa aka idozi mmetụta ndị metụtara ọgwụgwọ ọrịa kansa, dị ka ọgbụgbọ, isi ọwụwa na mgbu. A na-ekwu na CBD nwere ike ịnwe ihe na-alụ ọgụ kansa. Agbanyeghị, enwebeghị ihe akaebe nke ahụ. A ga -achọ nyocha ọzọ iji gosipụta ịdị irè ya.
CBD nwere ike inye aka belata ihe otutu: Ihe otutu bụ ọnọdụ akpụkpọ anụ na -emetụta ihe dịka 10% nke ndị mmadụ. Ọ bụ ihe dị iche iche kpatara ya, nje bacteria, mbufụt nke anụ ahụ, mmepụta sebum, yana ọbụna mkpụrụ ndụ ihe nketa. Dabere na nyocha sayensị na nso nso a, otu n'ime uru mmanụ CBD bụ na ọ nwere ike inye aka gwọọ ihe otutu n'ihi ihe mgbochi mkpali ya na ikike ibelata mmepụta sebum.
CBD nwere ike ịba uru maka ahụike obi: Nnyocha ndị e mere n'oge na -adịbeghị anya jikọtara CBD na ọtụtụ uru maka obi na sistem ọbara, gụnyere ikike ibelata ọbara mgbali. Ejikọtara ọbara mgbali elu na ihe egwu dị elu nke ọnọdụ obi, gụnyere ọrịa strok na nkụchi obi. Nnyocha na -egosi na CBD nwere ike inye aka na ọbara mgbali elu.
Uru ndị ọzọ enwere ike nke Mmanụ CBD: Agbanyeghị na achọrọ nyocha ọzọ, CBD nwere ike ịnye uru ndị ọzọ.
Ọgwụgwọ megide ị substanceụ ọgwụ ọjọọ: A na -eche na CBD ga -agbanwe okirikiri ụbụrụ metụtara ọgwụ riri ahụ.
Mmetụta antipsychotic: CBD nwere ike inyere ndị nwere ọrịa isi mgbaka na nsogbu uche ndị ọzọ aka ma belata mgbaàmà nke mmụọ.
Mgbochi ọrịa shuga: N'ime ọmụmụ ụmụ oke, CBD belatara ọrịa shuga karịa 50%.
Ị nwere ike nweta ọkwa dị elu ugbu a n'ọtụtụ steeti. Site na Lifehacker
OsoteNext post:CBD na Ọrịa shuga - Iji Mmanụ CBD mee ka ọ̀tụ̀tụ̀ shuga dị n'ọbara | Ngwa kacha mma 2021
Chọọ blọọgụ ọhụrụ anyị
Blọọgụ kacha ọhụrụ
Delta 8 THC & Mbelata Ibu
Akụkọ mkpesa ọgụgụ isi nke onye nnọchi anya Freak Nasty 8-30-2021
Nkwupụta ọgụgụ isi nke onye nnọchi anya ya n'ọnwa gara aga 7-25-2021
Nkwupụta ọgụgụ isi nke izu ụka nke onye nnọchi anya 6-27-2021
Texas kwadoro ngwaahịa Delta 8 THC
Ọhụrụ: Nnyocha na -ekwu na nnukwu ọgwụ CBD na -enyere ndị oke aka aka ibelata ihe oriri
Ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Red Emperor CBD dabere na ọtụtụ puku afọ nke ọgwụgwọ nke ọma site na osisi hemp nke mbụ edere n'akụkọ ihe mere eme nke Emperor Shing Nung na -akpọkwa Red Emperor. Azụ ahịa Cannabis nke Isenselogic.com bụ ụlọ ọrụ SEO nke mbụ maka marijuana ntụrụndụ, wii wii, yana weebụsaịtị CBD.
Choputa anyi na:
Ibe Facebook mepere na windo ohuruIbe Twitter meghere na windo ọhụrụIbe YouTube ga -emepe na mpio ọhụrụIbe njikọ Linkedin ga-emepe na windo ọhụrụIbe Instagram ga -emepe na mpio ọhụrụ
Copyright © 2020 RedEm EmperorCBD.com | Kwadoro site na IsenseLogic.com